संक्रमित देखिनासाथ अस्पताल बन्द गरे उपचार कहाँ गर्ने? – AayoMail
संक्रमित देखिनासाथ अस्पताल बन्द गरे उपचार कहाँ गर्ने?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २९ गते १९:२०
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले फैलिँदै जाँदा ठूला अस्पतालका सेवा प्रभावित बन्दै गएका छन्।
चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा अस्पतालले सेवा नै बन्द गर्ने गरेका छन्। जसका कारण बिरामीले सास्ती भोग्दै आएका छन्।
अस्पतालले पर्याप्त तयारी नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला बताए।
पछिल्ला दुई दिनमा देशका तीन ठूला सरकारी अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्।
विशेषगरी चिकित्सक तथा नर्समा समेत संक्रमण देखिएका कारण ठूला सरकारी अस्पताल वीर, त्रिवि शिक्षण र धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सेवा प्रभावित छन् ।
देशका भरपर्दा स्वास्थ्य संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द भएपछि दैनिक सेवा लिन आउने हजारौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन्।
सरकारी क्षेत्रको जेठो तथा ठूलो अस्पताल वीरका एक चिकिकत्सकमा संक्रमण पुष्टि भएपछि रेडियोलोजी विभाग नै पूर्णरूपमा सिल गरिएको छ।
डाक्टरले बिरामी हेरेपछि रोग तथा समस्या पहिचान गर्न रेडियोलोजी विभाग रेफर गर्ने गरिन्छ। तर, दिनहुँ हजारौं संख्यामा ओपिडी सेवा लिन आउने अस्पतालको मुख्य विभाग नै बन्द भएपछि सर्वसाधारण उपचारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपरेका कारण केही दिनका लागि सेवा बन्द गर्नुपरेको बताए।
‘नियमित सेवा केही कम गर्दै लगेको हो, बन्द भने गरेका छैनौं,’ डा. सेन्चुरीले भने, ‘आकस्मिक रूपमा आएका बिरामीलाई ज्यान जोखिममा राखेर पनि सेवा दिँदै आएका छौं।’
त्यसैगरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दुई चिकित्सक र चार नर्समा संक्रमण पुष्टि भएपछि बुधबारदेखि आकस्मिक विभाग नै सिल गरिएको छ। जसका कारण आकस्मिक रूपमा आउने सबै बिरामी सेवाबाट वञ्चित भए।
नर्सिङ स्टाफ र चिकित्सकमा लक्षणसमेत देखिएको र अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा पनि सरेको हुनसक्ने अनुमान गरेसँगै आकस्मिक विभाग सिल गर्नुपरेको अस्पतालका निर्देशक डा. रोहित पोखरेलले बताए।
‘आकस्मिक विभागका अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा समेत ज्वरो आउने लक्षण देखिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीमा लक्षण देखिँदा–देखिँदै काम लगाउन त भएन नि,’ डा. पोखरेलले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौं। शनिबारसम्म अस्पतालले आकस्मिक सेवा दिन सक्दैन।’
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अनिश्चितकालका लागि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको छ।
प्रतिष्ठानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण भन्दै बुधबारदेखि बहिरंग सेवा बन्द गरेको छ। जिल्ला प्रशासनको निषेधाज्ञा र धरान उपमहानगरपालिकाको लकडाउनलाइ मध्यनजर गर्दै सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता निदेश सापकोटाले बताए।
प्रतिष्ठानमा हालसम्म ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
‘पाँचजना स्वास्थ्यकर्मीका परिवारसहित ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘उपचार नगरी नहुने बिरामी सेवाबाट वञ्चित छैनन्।’
ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्दा अनावश्यक रूपमा बिरामी चाप बढ्न गएको र संक्रमण फैलिने डर भएका कारण सेवा बन्द गर्नुपरेको सापकोटाको तर्क छ।
हाल प्रतिष्ठानमा १ सय २ संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा नर्मल बिरामी हेर्दा प्रिकसन नअपनाउँदा संक्रमण फैलिएकोे डा. सेन्चुरीको अनुमान छ।
‘आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीलाई तुरुन्तै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालै पिसिआर गर्न पनि सम्भव छैन,’ डा. सेन्चुरी भन्छन्, ‘सुरक्षा–सामग्री अवलम्बन गर्दा पनि संक्रमण रोकथाम गर्न सकेका छैनौं।’
कोरोना संक्रमणले केही दिनयता सेवा लिन आउने संख्या घटिरहेको छ। डा. सेन्चुरीका अनुसार केही दिनअघि १ हजारभन्दा माथि ओपिडी सेवा लिने बिरामी संख्या हाल ३ सयमा झरेको छ।
हाल प्रेसर, सुगर, दम, पेटसम्बन्धी रोगका बिरामी सेवा लिन आएका छन्। त्यसैगरी मिर्गौला डायलासिस गर्ने, एचआइभी, टिबी तथा नियमित फलोअपमा आउने गरेको डा. सेन्चुरीले बताए।
काउन्सिल अध्यक्ष कोइराला भन्छन– डरले सेवा रोक्ने प्रवृत्ति छ
पछिल्लो समय कोरोनाकै डरले अनावश्यक रूपमा अस्पताल सिल गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कोइरालाले बताए।
‘संक्रमित र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउनु हुँदैन। तर, कतिपय संस्थाले जनशक्ति मौज्दात भएर सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा समेत डरकै भरमा सेवा रोकेका छन्,’ डा. कोइरालाले भने।
भाइरस रोकथामका उपाय अवलम्बन नगर्दा वा स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त सुरक्षा–सामग्री उपलब्ध नहुँदा अस्पतालभित्र संक्रमण फैलिएको डा. कोइरालाको भनाइ छ। भर्ना भएका बिरामीलाई भेट्न अनावश्यक मानिसलाई प्रवेश दिँदा थप संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिकित्सक बताउँछन्।
विज्ञहरूले पिसिआर परीक्षण बढाउने, अनिवार्य परीक्षण गरेरमात्र अस्पताल प्रवेश गर्न दिने, स्वास्थ्यकर्मीले पनि आफ्ना साथीसँग अनावश्यक नजिकको सम्पर्कमा नआउने, सुरक्षा–सामग्री नअपनाइ बिरामी नहेर्ने गरे संक्रमणलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
‘स्वास्थ्यकर्मीबीच सामाजिक दुरी कायम भएको पाइँदैन,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘संक्रमण छैन भनेर अनावश्यक टाँसिएर खाना खाँदै गरिएको देखिन्छ।’
शंका नभएका बिरामीलाई हेर्दा पनि प्रिकसन लिनुपर्दछ। सावधानीका उपाय अबलम्बन नगर्दा एकजना संक्रमित हुँदा ५० जना आइसोलेसनमा जानुपरेको छ। ‘जसले गर्दा अनावश्यक रूपमा अस्पतालका सेवा प्रभावित बनेका छन्,’ डा. कोइरालाले भने।